Filtrer les éléments par date : jeudi, 26 septembre 2019
jeudi, 26 septembre 2019 16:11
Governora: Asehoy fa tena te hiroso marina amin'ny fitsinjaram-pahefana
Tsy asiako resaka maro ny maha ara-dalàna na tsia ny fanendrena io Governora io, na manaraka ny Lalampanorenana na tsia, efa maro ny resaka natao momba azy io, ary izany no isan'ny tsy naharaikitra ilay fitsampankevi-bahoaka saika hanovana Lalampanorenana farany teo iny.
Efa natao moa ny Governora, dia ho hita eo ny maha ara-dalana azy na tsia.
Fa raha tena manana finiavana marina ampandroso ny faritra sy ny hisian'ny fitsinjaram-pahefana, dia tena omeo andraikitra io Governora io, na lehiben'ny Faritra fa novaina anarana fotsiny hoe Governora. Tsara ny hoe nomena 1 miliara ariary izy hanaovany ireo asa maika. Fa rano mitete izany raha ny teti-bolam-panjakana ampidirin'ny Faritra amin'ny foibe, izay mitetina 8000 miliara ariary. Ny an'ny présidence sy primatiora fotsiny ny fampandehanan-draharaha no efa mihoatran'ny 443 miliara ariary, nefa Faritany 6 zara raha 6 miliara ariary.
jeudi, 26 septembre 2019 15:49
Antsirabe: Nitrangana haintrano 5 tato anatin'ny iray volana
Nitrangana haintrano tao Antsinanan-tsena Antsirabe ny alin’ny alarobia 25 septambra hifoha alakamisy, tokony ho tamin’ny 10 ora alina tany ho any. Trano hazo, fivarotana avokoa, izay niisa 10 teo ho eo ireto kilan’ny afo ireto. Tsy nisy noraisina na ny entana na ny trano fa dia lavenona tanteraka avoko izany, kanefa dia fivarotana finday, fivarotana fitaovam-panatanjahantena, toeram-pilalaovana “jeux PC” sy fivarotan-kazo sy entana samihafa ireto may ireto.
Tsy nisy afaka nanamarina ny niavian’ny afo hatreto ny niharam-boina, saingy tombanan’izy ireo fa sabôtazy ity tranga ity satria misy olana io tany niorenan’ireo fivarotana ireo io.
Tato anatin'ny iray volana izay dia trangana haintrano 5 no niseho teto Antsirabe, in-droa izao ny teo Atsinananantsena, in-droa Atsimontsena ary iray teo Andraikiba.
jeudi, 26 septembre 2019 15:05
Tranombokim-pirenena Anosy: Fampisehoana ny asan'ny ministera tsirairay
Ny ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina dia mikarakara varavarana misokatra mahakasika ireo ministera isan-karazany, sy ny rantsa-mangaikany avy. Hita ao ny tetikasan’izy ireo tsirairay, toy ny fikarakarana taratasy isan-karazany.
Ity hetsika ity moa dia tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny zo mahafantatra na ny "Journée internationale de l’accès universel à l’information", izay maharitra telo andro. Manomboka androany faha 26 ka tsy hifarana raha tsy ny sabotsy 28 septambra ho avy izao, eo amin’ny tokotanin’ny tranombokim-pirenena Anosy.
Miisa 35 ny tranoeva miranty eny, ary tafiditra ao anatin’izany ireo ratsamangaika rehetra eto Madagasikara.
Malalaka ho an'ny rehetra ny varavarana misokatra.
jeudi, 26 septembre 2019 14:26
Antsirabe: Mananontanona ny tsy fahampian-drano
Efa mananontanona eto Antsirabe ihany koa ny olana amin’ny rano. Efa misy fikorontanana ny famatsiana rano aty an-tanàn’Antsirabe mandritra ny tontolo andro amina faritra maromaro, noho ny fihenan’ny rano ao amin’ny farihin’Andraikiba, izay sambany tato anatin’ny taona vitsivitsy no nihena be toy izao.
Raha ny fanazavana azo, noho ny fahatongavan’ny maintany dia misy fihenana ny rano ao amin’io farihin’Andraikiba io, ary ny loharano eny Marofangady, izay toerana misy ireo toby roa famokaran-dranon’ny Jirama Antsirabe, eo ihany koa ny fitomboan’ny filan’ireo mpanjifa manana fandaniana lehibe ka tsy maharaka ny rano vokarin’ny Jirama, na dia efa misy aza ny ezaka ho fampitomboana ny famokaran-drano.
jeudi, 26 septembre 2019 14:13
Jacques Chirac: Nodimandry tao Paris androany teo amin’ny faha-86 taonany
Nodimandry androany tao Paris teo amin’ny faha-86 taonany i Jacques Chirac. Efa nolazoin’ny aretina taona maro izy. Tamin’ny taona 2014 no niseho vahoaka farany izy.
Efa nitsidika teto Madagasikara i Jacques Chirac tamin’ny Jolay 2005. Tao Mahajanga no nigadona ny fiaramanidina nitondra azy ny 21 jolay. Nandalo iny lalana Anosibe-Antananarivo iny izy sy ny filoha Marc Ravalomanana tamin’izany, ary nanamarika ny diany teto ny tsangambato teo Angarangarana Anosibe.
Efa in-droa voafidy (1995 sy 2002) ho filoham-pirenena frantsay i Jacques Chirac. Efa Praiminisitra tamin’ny fitondran’i Valéry Giscard d'Estaing sy François Mitterrand.
jeudi, 26 septembre 2019 13:50
Nantenaina: Nitarika ny mpiaradia aminy nanome rà
« Manome Rà, manome aina » ary « Mizara rà, mifamatotra am-pitiavana » io no manosika an’i Nantenaina ka nitaomany ireo mpiaradia aminy niazo ny Hôpitaly Be CHU Analankininina Toamasina ny alarobia 25 septambra 2019 nanome rà maimaimpoana.
Kandidà amin’ny fifidianana Ben’ny tanàna hatao amin’ny 27 novambra 2019 i Nantenaina, mitondra ny laharana voalohany (1) amin'ny bileta tokana. Nambarany fa fanehoam-pahavononana hanasoa an’i Toamasina izao nasehon’ny ekipa IRD tarihiny izao, miaraka tamin’ireo kandidà ho Mpanolontsaina ary mpikambana tsotra.
jeudi, 26 septembre 2019 13:49
France: Jacques Chirac décédé ce matin
Sa famille a annoncé ce jeudi 26 septembre 2019 la disparition de l'ancien président de la République française Jacques Chirac, à l'âge de 86 ans.
"Le président Jacques Chirac s'est éteint ce matin au milieu des siens. Paisiblement", a déclaré son gendre Frédéric Salat-Baroux, époux de Claude Chirac.
Né le 29 novembre 1932 à Paris et mort le 26 septembre 2019, est un haut fonctionnaire et homme d'État français. Il est président de la République française du 17 mai 1995 au 16 mai 2007.
18 ans maire de Paris.
jeudi, 26 septembre 2019 09:18
Madagasikara – Norvezy: Hiitatra ny fiaraha-miasan’ny firenena roa tonta
Taorian’ny fisoloana tena ny Filohan’ny Repoblika, nandritra ny fihaonamben’ny Firenena Mikambana, dia nihaona tamin’ny Praiminisitra Norveziana, Erna Solberg, ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta malagasy, Ntsay Christian.
Fotoana iray nahafahana nifanakalo hevitra momba ny hanatsaràna ny fifandraisana eo amin’ny firenena roa tonta izany. Voalaza ary fa ankoatra ny fandraisan’i Norvezy anjara amin’ny fampiharana ny fanjakana tsara tantana sy ny ady amin’ny kolikoly dia hisandrahaka amin’ny sehatry ny fampianarana, ny fambolena, ny fahasalamam-bahoaka, ny indostria, ary ny toe-karena izany fanampiana izany.
Manomboka izao, araka ny volavolan-kevitra naroson’ny Minisitry ny Ati-tany sy ny fitsinjiram-pahefana nandritra ny filankevitry ny minisitra ny alarobia 25 septambra 2019, nandaniana ny didim-panjakana mametra sy mandamina ny anjara andraikitry ny Governoran’ny faritra dia "Governora" no hiantsoana ny Lehiben'ny faritra.
Ny "Governora" no hiantsoroka ny fahefana mpanatanteraka any amin'ny faritra ; izy no hiandraikitra ny asa fampandrosoana isam-paritra.
Homena 1 miliara Ariary isam-paritra hanaovany asa maika tahaka ny lalana rary vato, ny tsena, sy ny fotodrafitr’asa tena ilain'ny mponina andavanandro, ao anatin'ny telo volana.